फाटेको मन सिउने डाक्टर शनिबार, भदौ २३, २०७५
नेपालकै पहिलो अन्को रेडियोलोजिस्ट, जसलाई महिला डाक्टर भनेर प्रसूति गृहमा पठाइयो शनिबार, भदौ २, २०७५
मिर्गौला फेल भए पनि आफ्नो उपचार गराउँदै अरुको उपचार गर्दै हाँसिरहेका डा श्यामबहादुर पाण्डे शनिबार, साउन २६, २०७५
पाइजामा लगाउँदा राणाको धम्की खानेदेखि आफ्नो रमाना पत्र आफैं लेख्ने डाक्टर द्वारिकानाथ रेग्मी शनिबार, असार १६, २०७५
सुलभ स्वास्थ्य सेवाका हिमायती सोमबार, जेठ २१, २०७५
जीवनभर उपत्यकाबाहिर बस्ने डाक्टर बुधबार, जेठ २, २०७५
आइओएमका अब्बल उत्पादन सोमबार, वैशाख २४, २०७५
मन्त्रीलाई ट्‌वाइलेट पेपरमा राजीनामा दिने डाक्टर आफू ‘दिने पेशामा’ रहेको बताउने डा भट्टाचार्यले कसैबाट कहिल्यै केही लिन मानेनन् । सरकारी अस्पतालबाट सेवा निवृत्त नहुँदासम्म उनले निजी चिकित्सकीय अभ्यास समेत गरेनन् । शनिबार, वैशाख १५, २०७५
उज्यालोकी सहयात्री डा सविता बिहीबार, चैत २९, २०७४
मातृशिशु स्वास्थ्यका अध्येता सोमबार, चैत ५, २०७४
मुटुरोगमा महिला विशेषज्ञ बिहीबार, फागुन २४, २०७४
अघिल्लो पुस्ताका एक डाक्टर, जसले २०२१ सालमा किताब पढ्दै सर्जरी गरे शनिबार, माघ २७, २०७४
बाथरोगका विनित बिहीबार, माघ २५, २०७४
हिप्पीको बिगबिगीमा दुर्व्यसनी विरुद्ध उभिएका डाक्टर शनिबार, पुस २९, २०७४
एएफसीबाट गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर शनिबार, पुस १, २०७४
नयाँ उपचार पद्दतिका पक्षधर मंगलबार, मंसिर २६, २०७४
जो पहिलोपल्ट बिरामी, दोस्रोपल्ट विशेषज्ञ भएर पुगे वीर अस्पताल बुधबार, कात्तिक २२, २०७४
राजा वीरेन्द्रका डाक्टर आइतबार, कात्तिक १९, २०७४
नेपालमा मुटु सर्जरीको जग हाल्ने डाक्टर कुनै समय सामान्य क्लिनिकका रुपमा सुरु भएको अहिलेको हिमाल अस्पतालका संस्थापक हुन् डा. लोकविक्रम थापा। तर, नेपालको चिकित्सा इतिहास नियाल्ने हो भने उनी निजी क्षेत्रको विकासमा मात्र अग्रसर देखिँदैनन्, केही उदाहरणीय कार्यमा जोडिएका भेटिन्छन्। बिहीबार, भदौ १, २०७४
एसएसलसी तेस्रो श्रेणीमा उत्तिर्ण अर्जुन कार्की कसरी बने टप डाक्टर? बुबाको सरुवा सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा भयो र चौतारापछि रामेछाप । दुवै जिल्लामा गरी झन्डै पाँच वर्ष बसे । चौतारामा बसेका बेला उनले स्थानीय श्रीकृष्ण विद्याश्रममा पढे । बिहीबार, असार ८, २०७४
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका नेतृत्वकर्ता डा बाबुराम हामीले एउटा कुरा ठूलो गल्ती गरेका छौं, मेडिकल कलेज स्वास्थ्यमा राख्नुपर्नेमा शिक्षामा राखेका छौं, बंगलादेश, पाकिस्तानले स्वास्थ्यअन्तगर्त राखेका छन्, हामी भने भारतीय मोडलमा गएका छौं। अस्पताल स्वास्थ्यअन्तर्गत राखेका छौं हामीले। दुईवटा मालिक हुनेबित्तिकै विकृति सुरु भएको हो। शुक्रबार, कात्तिक २६, २०७३
परिवार नियोजनका अभियन्ता - डा बद्रीराज पाण्डे अहिले त हाम्रो समाजमा मानिसहरू परिवार नियोजन गर्न हत्तपत्त अघि सर्दैनन्। त्यो थियो आजभन्दा पाँच दशकअगाडिको समाज। परिवार नियोजनको एजेण्डा बोकेर हिड्न जोखिमपूर्ण थियो। तर काम सही भएकाले उनी यो अभियान पूरा गरिछाड्ने अठोट बोकेर हिडेँ। मंगलबार, असोज ४, २०७३
आफ्नो बन्ध्याकरण आफैं गर्न डाक्टर सन् १९८७ मा नेपाल परिवार नियोजन संघबाट राजीनामा दिएपछि उनी विश्व स्वास्थ्य संगठनको कन्सल्टेन्ट भएर बंगलादेश गए । एक वर्षको कार्यकाल सकिएपछि तीन वर्षको अफर आएको थियो । तर उनलाई त्यहाँ बस्न मन लागेन । सोमबार, असोज ३, २०७३
चमत्कारी डाक्टर प्लास्टिक सर्जन त्यसै पनि चमत्कारी चिकित्सक हुँदै हुन् । त्यसमाथि डा. शंकरमान राईले त आफ्नै जीवनमा सोच्दैनसोचिएका थुप्रै चमत्कार गरेर देखाइदिएका छन् । शनिबार, जेठ २२, २०७३
नेपालका पहिलो बालरोग विशेषज्ञ ६० वर्षभन्दा लामो डाक्टरी करिअर बनाएका डा. राजभण्डारी अहिले पनि बिरामी हेरिरहेका छन्। तर, सम्झेर आउनेलाई मात्र। अवस्था कस्तो छ भने नयाँ पुस्ताका ९० प्रतिशत डाक्टरले उनलाई चिन्दैनन्। मुलुककै पहिलो बालरोग विशेषज्ञ हुनुको गौरव पनि उनलाई प्राप्त छ। बिहीबार, फागुन २१, २०७१
जनस्वास्थ्यमै जीवन स्वास्थ्यबाहेक उनी रोटरीमार्फत् सामाजिक काममा पनि सक्रिय छिन्। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामबाहेक उनको शोख इन्टेरियर डेकोरेसन र पुस्तक पढ्ने हो। मंगलबार, माघ २७, २०७१
अटुट समर्पण मेडिकल शिक्षामा सन् २००८ मा उनी त्रिविबाट रिटायर्ड भए। त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको कन्सल्टेन्ट भएर जापान, भारतलगायतका देशमा काम गरे। पछि फर्केर आएपछि किस्ट मेडिकल कलेजमा काम गरे। मंगलबार, माघ १३, २०७१
शताब्दीका डाक्टर डा. दासले विभागको नेतृत्व लिएका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनको पहिलो क्षेत्रीय बैठक नेपालमा भयो। त्यसको अध्यक्ष पनि उनै भए। त्यतिखेर राष्ट्रिय सभागृह भर्खर बन्दै थियो। बैठक आयोजना गर्ने ठाउँ नभएकाले उनले राष्ट्रिय सभागृहलाई नै रोजे। मंगलबार, पुस १५, २०७१
नेपालका न्युरोसर्जरीका पिता अहिलेका युवा डाक्टरलाई उनको सफलताको मन्त्र छ, ‘जे गरे पनि असफलताबाट हतोत्साही हुनुहुन्न, बिरामीकेन्द्रित हुनुपर्छ र असफलताकै जगमा अघि बढ्दै जानुपर्छ।’ बिहीबार, मंसिर १८, २०७१
परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्यकी अभियन्ता सन् १९८६ देखि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा काम गर्न थालेकी डा.रिताले २००१ देखि उमेर हदका कारण अवकाश पाइन्। देश फर्किएपछि उनी नेपाल सरकारको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य नीति सल्लाहकारको रुपमा छिन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न समितिमा रहेर नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रलाई उकास्ने कार्यमा अझैं पनि योगदान दिइरहेकी छिन्। शनिबार, साउन १७, २०७१